पक्राउ गर्न प्रहरी आएपछि रुखमा चढे आरोपी, ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो प्रहरी ! – Online Khabar 24
पक्राउ गर्न प्रहरी आएपछि रुखमा चढे आरोपी, ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो प्रहरी !
पुरा खबर अघि यो भिडियो,
काठमाडौं। आफूलाई प’क्राउ गर्न प्र’हरी आएको थाहा पाएपछि एकजना आ’रोपी रुखमा चढेर बसे ।
उनी लग भग तीन दिनसम्म रुखमै बसे र प्र’हरी पनि ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो । ३ दिनपछि अन्ततः ती व्यक्ति भुइँमा ओलिएका छन् ।
भुइँमा ओर्लिएपछि उनलाई प्र’हरीले हि’रासतमा राखेको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरको क्विन्समा रुखमा चढेर बसेका उनी स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बेलुका रुखबाट ओर्लिएका हुन् ।आफूलाई पक्राउ गर्न
प्रहरी आएको थाहा पाएपछि ४४ वर्षका रुडी थोमस बुधबार दिउँसो २ बजेतिर गि’रफ्ता’रीबाट बच्न रुखमा चढेका थिए । सीबीएस न्यूजका अनुसार उनी शुक्रबार बेलुकी ५ बजे मात्र रुखबाट ओर्लिए ।
प्रहरीले उनलाई तल झार्न निकै प्रयास गरेको थियो । प्रहरीले साइरन प्रयोग गर्ने, ड्रोन उडाउने देखि ती व्यक्तिलाई तल झर्नको लागि मनाउन विभिन्न व्यक्तिहरुलाई फकाउन लगाए पनि कुनै पनि उपायले काम गरेन । अन्ततः एक पास्ट रले उनलाई प्र हरीले कुनै षति नगर्ने विश्वास दिलाएपछि उनी ओर्लिन राजी भएका थिए ।
थोमसले ध’म्की’ दिएको भन्दै उनकी आमाले प्र’हरीलाई खबर गरेपछि प्रह’री उनलाई प’क्राउ गर्न आएको थियो । यस्तै फरक खबर,
एजेन्सी । एक महिलाले आफ्ना पतिलाई बिक्रिमा राखेकी छन् । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण पतिसंग बस्न दिक्क लागेपछि उनले पतिलाई नै विक्रीमा राखिदिएकी हुन् । झण्डै दुई वर्ष देखि कोभिडले साथ छोडेको छैन ।
मानिसलाई सजिलोसंग घर वाहिर निस्केर काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा सबै परिवार घर भित्रै रहनु परेको छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न धेरै राष्ट्रहरुले लकडाउन गरेका थिए । लामो समय लकडाउन हुँदा केही आश्चर्यलाग्दा घटनाहरु पनि भएका छन् ।
चीनमा पछिल्लो केही समय यता डिभोर्स गर्नेको संख्या अत्यधिक बढीरहेको छ । लकडाउनमा पति र पत्नी एकैसाथ धेरै लामो समय बिताउन गाह्रो परेको हो । यसको सिधा असर विबाहीत जोडीको वैवाहिक स म्ब न्धमा परेको हो ।
धेरै पहिलेदेखि सँगै बस्दै आएका जोडीहरु नै अफ्ठेरोमा परेको देखिन्छ । भनिन्छ, २४ घन्टा कसैसँग सँगै बस्दा त्यसैपनि झ ग डा हुन्छ । एक महिलाले आफ्नो पतिसँग रिसाएर घर बाहिर पति बिक्रिमा भएको बोर्ड राखेकी छिन् । पुर्तगालको लिस्बन शहरमा एक जोडीबीच सधै झ ग डा हुनेगर्थ्यो । विवाद हुँदै जाँदा महिलाले आफ्नो घर बाहिर बोर्डमार्फत पति बिक्रि (सेल)मा राखेकी हुन् । साभार गरियको खबर ।
Prevपुजा जी सबै पत्रकारको दानापानी हजुरकै कारण चलिरहोस् ।’
nextमिर्गौला दिएर मृ’ त्युको मुखबाट बचाएको प्रेमिकाले जब बिहे गर्न नमानेपछि…